Buku: mpitantana tsoratadidy mandroso ao amin'ny terminal | Avy amin'ny Linux
ny mpanamarika Famoronana mahafinaritra izy ireo, ny fahaizana manana eo an-tanana sy amin'ny fomba voarindra ireo tranonkala izay mahaliana antsika ao anatin'ny segondra vitsy, mahatonga ny fizahana amin'ny Internet ho fomba mahomby kokoa. Console tia anay dia manana fitaovana tsara antsoina hoe Boky izay mamela antsika hitantana ny tsoratadidy avy amin'ny terminal, haingana, mora ary miaraka amin'ny browser.
1 Inona no atao hoe Buku?
2 Boky fiasa
3 Ahoana ny fametrahana Buku
3.1 Ahoana ny fametrahana boky amin'ny Arch Linux sy ny derivatives
3.2 Ahoana ny fametrahana Buku amin'ny Debian, Ubuntu ary ny derivatives
3.3 Ahoana ny fametrahana Buku avy amin'ny kaody loharano
Inona no atao hoe Buku?
Izy io dia mpitantana tsoratadidy loharano misokatra tsara sy matanjaka, novolavolaina tao python3 y SQLite3 ny Arun Prakash Jana, izay ahafahanao mitahiry sy mitantana tsoratadidy avy amin'ny console nefa tsy very antsipiriany akory, miaraka amin'ny fitantanana tsotra sy fampiasana azo ampiasaina.
Tsotra ny asany, buku mahazo ny lohatenin'ny pejin-tranonkala misy tsoratadidy ary mitahiry azy miaraka amin'ireo fanehoan-kevitra sy marika fanampiny, amin'ny fomba mitovy amin'ny sakafony avy amin'ny mpanova tsoratadidy hafa.
Boky Manana safidy fikarohana marobe izy, ao anatin'izany ny fitenenana mahazatra sy ny fomba fizahana lalina (indrindra ho an'ny URL), izay ahafahanao mahita tsoratadidy eo noho eo. Toy izany koa, ny valin'ny fikarohana marobe dia azo sokafana amin'ny navigateur voajanahary.
Azontsika atao sary an-tsaina amin'ny antsipirihany ny fiasan'ny buku amin'ireto gif manaraka ireto:
Fampiharana maivana miaraka amina interface madio.
Fampidirana tsara miaraka amin'ny tonian-dahatsoratra.
Mikaroha amin'ny lohatenin'ny pejy, marika sy hevitra.
Fomba fikarohana marobe (ohatra deep, regex).
Sokafy ny tsoratadidy sy ny valin'ny fikarohana ao amin'ny browser.
Fampiasana fanafarana HTML na Markdown be dia be.
Fampiasana hanafohezana sy hanitarana URL.
Amboary ny tags smart miaraka amin'ny >>,> na <<.
Azo entina, miaraka amin'ny mety fampifanarahana ny tahiry eo anelanelan'ny fametrahana isan-karazany ny fitaovana.
Antontan-taratasy midadasika miaraka amin'ny script sy pejy ohatra.
Mora ampiasaina ary mifanaraka amin'ny tontolo birao.
Ahoana ny fametrahana Buku
Mba hametrahana Buku dia tsy maintsy arahinay aloha ireto fiankinan-doha manaraka ireto: Python 3.3 na avo kokoa, urllib3, cryptography, beautifulsoup4, requests. Ireo fiankinan-doha ireo dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny pip3 miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto:
Manaraka izany dia manohy mametraka an'i Buku amin'ny pip3 ihany koa izahay amin'ny fanatanterahana ity baiko ity:
Ahoana ny fametrahana boky amin'ny Arch Linux sy ny derivatives
Arch Linux sy mpampiasa derivative dia afaka mametraka an'i Buku amin'ny alàlan'ny tahiry AUR hanaovana izany, mandehana fotsiny ity baiko manaraka ity:
Ahoana ny fametrahana Buku amin'ny Debian, Ubuntu ary ny derivatives
Buku dia misy ao amin'ny fonosana zesty an'ireny distros ireny, koa raha ampandrenesinao izy ireo dia mihazakazaha:
Toy izany koa, ireo mpampiasa Ubuntu dia afaka manampy ny ppa an'ny rindrambaiko jarun ary mametraka ny rindranasa avy eo, mba hanaovana izany, manao ireto baiko manaraka ireto:
$ sudo add-apt-repository ppa: twodopeshaggy / jarun $ sudo apt-mahazo fanavaozana $ sudo apt-get install buku
Ahoana ny fametrahana Buku avy amin'ny kaody loharano
Ireo mpampiasa misimisy kokoa dia afaka mametraka an'i Buku avy amin'ny kaody loharano namboarina tao amin'ny github amin'ny fanarahana ireto dingana ireto:
Afaka mahita boky torolàlana tena tsara ho an'ny fampiasana an'ity fitaovana ity isika amin'ireto manaraka ireto rohy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Buku: mpitantana tsoratadidy mandroso ao amin'ny terminal
Misy mahalala ve ny terminal ampiasainy ao amin'ny gif?
Ny terminal tsy misy hevitra, fa toa lohahevitra ho an'ny zsh, https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/wiki/Themes eo no ahitanao ireo lohahevitra misy.